Zviratidzo zveZimbabwe: 20 inogona, kupemberera kubatana kweCameroon - TELES RELAY
HOME » mwe »Zviratidzo zveZimbabwe: May May 20, inopemberera kubatana kweCameroon
Iyi yezororo yenyika ichinguva chiduku chekudyidzana kukuru pakati peKameronans of all strata social.
Zvinhu zvose zvinotanga 20 May 1972, apo mutungamiri wekutanga weCameroon, Ahmadou Ahidjo anoronga mureza. Chinangwa: kupedza federal system muchiito kusvikira panguva iyoyo. Nokudaro, referendum yakakunda zvikuru uye 20 May yakava yororo yegore yeCameroon iyo ichanzi "United Republic Republic of Cameroon".
Chiratidzo che20 May
Nguva yekugoverana nekupemberera kurarama pamwe kwakabatana pamwechete, National Day of Unity yaipemberera 20 May wegore roga roga, inopfuura kupfuura zvematongerwe enyika, marudzi kana zvitendero. Kune vaKamerona, nguva iyi yekudyidzana, inounza pamwe zvikamu zvose mumatunhu gumi, inotarisira:
- Kuyeuka Republic of Cameroon,
- Kupemberera rugare
- Ita kuti kuwirirana kweChirungu neChiramese kuCameroon kunzwisiswe
- Kurisa huno husingaoneki hweRipublic of Cameroon.
Musi weMuvhuro 20 angangodaro 2019, nyika yacho ichanyadzisira ichienda kune rwiyo rwezororo iri munyika yose mundima. MuJaoundé, guta guru, kugamuchirwa kweVaMamerandan kubva kumativi akasiyana-siyana paUnited Palace kuchacherechedza zvakakosha zvechiitiko chacho mushure mekukwikwidza kwemauto uye zvematongerwe enyika kuBoulevard du 20 muna May. Mhemberero inotungamirirwa nemukuru wehurumende, Paul Biya.
Nyaya iyi yakatanga kutanga http://www.crtv.cm/2019/05/emblemes-nationaux-le-20-mai-celebrer-le-cameroun-uni/
Crunchy Rhubarb Recipe - NYT Kubika - New York Times